नेपाल आज | गणतन्त्र गुम्ने चिन्ता (भिडियोसहित )
अन्तरवार्ता भिडियो कभर स्टोरी कला साहित्य
गणतन्त्र गुम्ने चिन्ता (भिडियोसहित )
बुधबार, १५ जेठ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
‘नेपालमा गणतन्त्र नेताहरुको कारणले आएको होइन । गणतन्त्र ल्याउन नेताहरुको कुनै योगदान छैन । यसकारण गुम्ने चिन्ता पनि उनीहरुले गर्नु पर्दैन । नेताहरुले काम गर्ने हो, गफ होइन । नेताहरुले चुपचाप काम गरे गणतन्त्र आफै सुरक्षित हुन्छ । नेपाली जनताले यसको सुरक्षा गर्छन् । ’
यो भनाइ चर्चित कवि श्रवण मुकारुङको हो । मुकारुङ लेखक संघका अध्यक्ष पनि हुन् । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा ‘बिसे नगर्चीको वयान’ कवितामार्फत आन्दोलनको उभार ल्याउने र जनतालाई जुरुकजुरुक उचाल्ने कवि यिनै मुकारुङ हुन् ।
जतिबेला राजनीतिक दलहरुले आह्वान गरेको आन्दोलनमा मुश्किलले १०÷१२ जना मात्र हुन्थे, त्यो बेला हजारौं मान्छे जम्मा गर्ने काम साहित्यकार तथा कलाकारहरुले गरेका हुन् । मुकारुङ जस्तै अर्जुन पराजुली, बेञ्जु शर्मा, रुविन गन्धर्व लगायतका स्रष्टा सृजनामार्फत आन्दोलनमा सक्रिय भएकै कारण मुलुकमा परिवर्तन सम्भव भएको हो । २५० बर्ष पुरानो राजसंस्था पनि ढल्न पुग्यो ।
तर, गणतन्त्र प्राप्ति पछिका दिनहरु सुखद भएनन् । कवि मुकारुङ चिन्तित छन् । उनलाई गणतन्त्र गुम्ने चिन्ता छ ।
उनी भन्छन् ‘नेताहरुमा आचरण भएन । दृष्टिकोण पनि भएन । इमान्दार भएन । नेताहरु लोभी पापी भए, यही संस्कृति बसाए । कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्ट भयो । यसले गणतन्त्रलाई कमजोर बनायो ।’
‘हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र यस्तो होइन । अहिले त नेताहरु भौतिक सुखसयलमा रमाउन थाले । बयल गाढा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्नेहरुको हातमा मुलुकको शासन व्यवस्था पुग्यो । निजी सम्पत्ति जोड्न थाले । नैतिकता भन्ने पटक्कै भएन । जनताका समस्यातर्फ फिटिक्कै ध्यान छैन । नेताहरुको यस्तै व्यवहारले गणतन्त्रप्रति मानिसको वितृष्णा उत्पन्न हुँदैछ । कताकता मलाई गणतन्त्र गुम्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । ’ मुकारुङले भने ।
गणतन्त्रलाई बदनाम गर्नेहरुमा सबैभन्दा बढी सत्तारुढ दल नेकपा र अहिलेको सरकार एक नम्बरमा पर्ने मुकारुङको ठम्याई छ । ठूलो दल र अझ सरकारमा भएपछि जिम्मेवारी पनि ठूलै लिनुपर्छ ।
मुकारुङ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गणतन्त्रको सुरक्षासंगै विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । उनीहरु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत चलिरहेका छन् । यसले गणतन्त्र फस्टाउने होइन खुइलिन थालेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसलगायत मधेश केन्द्रीत दलहरुले पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । हिजोका दिनमा कांग्रेसले पनि ठूलाठूला गल्ती गरेको छ । तर, राम्रो पक्ष के हो भने कांग्रेसले गल्ती महसुस गरेको छ । सुध्रिने बाटोमा लागेको छ । यो गणतन्त्रको भविष्यका लागि पनि सुखद पक्ष हो ।
लोकतन्त्र या भनौ गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जतिसुकै गुनासो आएपनि अन्ततः यसको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो । यसको विकल्पको रुपमा राजसंस्था वा अरु कुनै अधिनायकवादको कल्पना गर्नु हुँदैन । त्यो सम्भव पनि छैन ।
राजनीतिक दलहरुमा युवा नेताहरुलाई नेतृत्वमा लैजान जरुरी छ । युवा पङ्तिलाई अवसर दिने हो भने मुलुक बनाउन धेरै दुःख गर्नु पर्दैन । युवाहरुको जोशसंगै केही नीतिगत र केही रणनीतिक कुरा परिवर्तन गरी आचरणमा सुधार गर्ने हो भने देश बन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।
जस्तै नेपालका युवाहरुलाई विदेश जबरजस्ती पठाइँदैछ । यो नीति कति उचित हो ? गाउँ पूरै खाली भैक्यो । जोत्ने मान्छे छैन । मलामी जाने मान्छे पाइँदैन । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन हामी किन सकिराखेका छैनौ ? उत्पादनमुखी काम किन हुन सकेका छैनन् ?
जबसम्म हामी यी प्रश्नको उत्तर खोज्दैनौ गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिनै रहनेछ । म फेरि पनि भन्छु, ‘ नेताहरुले गफ होइन काम गर्ने हो । गणतन्त्रको चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यसलाई सुरक्षा दिने काम नेपाली जनताले गर्छन् । ’